Umshado ungenye yezenzakalo ezibaluleke kakhulu ekuphileni komuntu. Ngakho-ke, labo abasanda kushada bazama ukwenza konke ukwenza lolu suku kube inkumbulo ekhanyayo nenjabulo. Indlela ukuhlobisa imoto yomshado? Impendulo yalo mbuzo ihlale ifuna abashadile abasanda kushada ngehora lomshado. Ngemuva kwakho konke, ufuna ukuthi umkhosi wokugubha ubheke ubuhle, ubuhle futhi uqobo. Izinto zokuhlobisa imoto yomakoti nomkhwenyana zingenziwa wedwa. Ukusiza bonke abasanda kushada, amathiphu alandelayo ku- "Indlela yokuhlobisa imoto yomshado" ayethulwa.
Umhlobiso wokuthutha komshado, owenziwe ngamathaneli e-satin kanye ne-kapron kanye neminsalo, ayizange ilahlekelwe ukuthandwa kwawo amashumi eminyaka. Futhi ngisho nezinto ezinjalo zendabuko zingaguqulwa zibe izingqungquthela zokuqala nezingqayizivele zemoto yakho yeholide. Isibonelo, ungenza igaraji elikhanyayo ngokwakho ngezandla zakho. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha ithrebhoni emibili noma emithathu (umnsalo) wemibono ehlukene kanye nobubanzi obuhlukene, uwagqoke futhi uwugqoke nge-accordion, uhlanganise phakathi komshini wokuthunga. Ngaphandle komkhiqizo ungadonsa imicibisholo emincane noma izimbali. Ngakolunye uhlangothi lomgqobo ukugubha ibhande le-raber ende. Ohlangothini olungalungile lomkhiqizo, gcoba izingcezu ze -tape kabili-emaceleni okudingeka uzinamathisele emotweni. Yeka ukuthi kuhle kangakanani ukuhlobisa imoto yomshado enezigodlo ezinjalo? Yisakaze ku-hood, uhlanganise ne-tape yokunamathisela. U-Eraser ngaphansi kwesihenqo, welula ekuqaleni kwetheyipu bese uthunga. Yilokho konke, i-garland enhle yama-riboni ayilungile.
Izingqungquthela zezimbali - umshado omuhle kakhulu wokuhlobisa imoto
Lapho ukhuluma ngombuzo wokuthi ungahlobisa kanjani imoto yomshado, cabanga ngendlela yokuhlobisa ngayo izimbali. Ukwakhiwa kwi-hood ye-auto kusuka ezimbali ezibukeka kubonakala kuhle. Ungakwazi ukuzikhethela ngokuzikhethela izimbali, wenze izingoma, kodwa ukugxilisa nokucubungula kwabo kungcono ukuzinikeza ochwepheshe-abacwaningi. Bazokwenza konke ukuqinisekisa ukuthi imihlobiso evela ezimbali ezihamba ngezindlela zokuthutha emshadweni ibanjwa ngokuqinile futhi ivikelekile, ihlale ihle futhi ihle kulo lonke leli holide.
Inzuzo yomhlobiso womshado kusuka ezitshalweni zokufakelwa ukuthi kulula ukunamathela emotweni, ayihlupheki ngemvula nangomoya, kungenziwa kalula ngezandla zakho. Njengoba ususondele izimbali eziningana kusuka kwendwangu, ibhande le-satin namathelethi, ungakha ukwakheka kwangempela. Kudingekile ukubeka izimbali ebhodleni, ukubopha i-ribbon. Kusukela esiqeshini se-tulle, yenza umnsalo omkhulu. E-bumper yocingo lemoto ukuze unamathisele izimbali zezimbali ezenziweyo, kusuka phezulu ukuze unamathisele umnsalo. Ukwakhiwa konke kutholakala ngokwengeziwe ngamabhande. Spread amaqabunga esiqhingini ukuze bafihle indawo yokulungisa ucingo. Ukwakheka okunjalo kulula ukwenza, kodwa kubonakala kunesizotha futhi kuluhlaza.
Indlela ukuhlobisa imoto yomshado nge amabhaluni
Kungani ungahambisani nomakoti nomkhwenyana musa ukuhlobisa ngamabhola? Ngoba namuhla kuyimfashini, isitayela futhi ayabizi kakhulu. Kusukela kuma-balloyi ungenza izigulangwe, izimbali, izingoma ngendlela yezinhliziyo noma izindandatho. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuqoqa amabhola ngombala nosayizi, uwafake bese uwabopha ekulungiselelweni okufunayo. Bese ubambelela ngokuphepha kumshini ngezindophi. I-hood idinga ukufakwa ngaphezu kokuhlanganiswa kwe- tape yokunamathisela.
Izinhlobonhlobo zenye inqubo yemishado yomshado:
Izitifiketi ze-Thematic zamapuleti elayisensi: "Singabantu bomshado", "Abashadile".
Amathoyizi emotweni yemoto (amadonsa, amabhere, amahares emigqokweni yomshado).
Izibalo ezinkulu emotweni yemoto: umnsalo womnsalo, "izindebe zesifazane."
Ukudweba ngamapende avela ku-can.
Esikhathini sesinqumo sombuzo wokuthi ungahlobisa kanjani imoto yomshado, yiza nomakhethi wakho (okhethiwe). Noma yikuphi indlela yokuhlobisa imoto oyikhethayo, into esemqoka ukuthi umphumela ujabulisa kuwe kanye nengxenye yakho yesibili yesikhathi esizayo. Sifisa ukuba "ushayela" empilweni yomndeni emotweni enhle kakhulu!
Inhlangano zemishado - kuphi ukuqala? Agency Inhlangano zemishado